गत महिना डिसेम्बर लाग्नासाथ नगर परिषदको निर्वाचन भयो। त्यसमा आर्य राजेन्द्रनलाई माकपाले लेफ्ट डेमोक्रयाटिक फ्रन्ट (एलडीएफ) को तर्फबाट शहरको मुदावनमुघल वडामा उम्मेद्वार सा(यो। उनको मुख्य प्रतिस्पर्धी भारतको राष्ट्रिय कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वको गठबन्धन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (युडिएफ) को उम्मेदवार थिए। राजेन्द्रनले २,८७२ मत पाई वडामा विजयी भइन्, जुन मत युडिएफको भन्दा ५४९ बढी थियो।
सन् २००९ मा केरलको एलडिएफ सरकारले महिलालाई सरकारको हरेक तहका निर्वाचित पदाधिकारीमा कम्तीमा ५०५ बनाइने निर्णय गरेको थियो। भर्खरैमात्र केरलको माकपाले युवाहरूलाई राजनीतिक प्रक्रियामा भाग लिन अनेकन प्रोत्साहित कदम चालेको छ। स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार बनेकी एक २२ बर्षे युवतिले बताइन् – ‘तिरुवनन्तपुरममा माकपाका ६६ प्रतिशत उम्मेद्वार महिला थिए। तीमध्ये जना ५ जना २५ भन्दा कम उमेरका थिए। यसैले पनि हाम्रो पार्टी अरुभन्दा भिन्न देखिएको हो।’
नयाँ केरल सरकारले उपचार सेवा र रोकथाम सेवालाई तुरुन्तै स्वास्थ्य सेवा प्रणालीभित्र एकीकृत ग¥यो। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा तत्काल स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकताहरू पुर्याउने योजनालाई प्राथमिकता दियो। यसो हुँदा क्रमशः प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको एक प्रणाली निर्माण ग¥यो जसको कारण केरलको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संसारमा उदाहरणीय भयो।
सन् १९९० को मध्यमा केरलको सरकारले र स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको नीति र योजना निर्माण कार्यलाई विकेन्द्रीकृत ग¥यो। धेरै जिम्मेवारीहरू स्थानीय निकायमा स्थानान्तरण गरियो। यसपछि त्यहाँ निकै परिवर्तनहरू देखिए। २०१४ मा जारी गरिएको एक रिपोर्ट अनुसार, ‘२०११ मा केरल राज्य उच्चतम मानव विकास सूचकांकमा भारतका अन्य राज्यहरूभन्दा अघि देखियो। ती सूचकांकहरू यस्ता छन्ः
लुम्पकिनले केरलमा आयोजित गणित शिक्षकहरूको सम्मेलनमा भाग लिन गएको प्रशङ्गलाई लेखेकी छिन्। उनी भन्छिन्, ‘केरल पुग्न मैले विमानहरू बदल्ने क्रममा एक दिन मुम्बईमा रोकिनु प¥यो। मुम्बईमा मैले धेरै परिवारहरू सडक छेउछाउ बसिरहेको देखेँ र तिनीहरू निन्याउरा देखिन्थे। विदाको दिन थिएन तर स्कुले उमेरका बच्चाहरू सडकमा हिंडिरहेका थिए, आफ्ना परिवारहरूसँग। मैले दुई हप्ता केरलमा बिताएँ। त्यसबेला म केरलको राजधानी तिरवनन्तपुरमका धेरैजसो पैदल नै यात्रा गरें। त्यहाँ मैले कहिल्यै कसैलाई पनि सडकमा बसिरहेको देखिनँ।’ मैले यस्तो हुनाका बारे त्यहाँका आयोजकलाई प्रश्न गरेँ। यसको जवाफमा उनीहरूले भने– ‘तपाईं यहाँ कुनै घरबारविहीन देख्नुहुन्न किनकि हाम्रो केरलमा भूमि सुधार भएको थियो। त्यसैले यहाँका सबै परिवारसँग एक न एक टुक्रा जग्गाको स्वामित्वमा छ।’
(अमेरिकाको मेनेमा बस्ने डब्ल्यू. टी. ह्विटनी जूनियर एक सेवानिवृत्त बाल रोग विशेषज्ञ हुन् र राजनीतिक पत्रकार हुन्।)साभार नेपाल रिडर्स बाट